သတ္တဝါ (သို့) တိရစ္ဆာန်များ
Temporal range: Cryogenian ကာလမှ – လက်ရှိအချိန်ထိ၊
၄ တိရစ္ဆာန် မျိုးကွဲပြားမှု
တိရစ္ဆာန်ဟူသော ဝေါဟာရကို ဇီဝဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၌ ရေမြှုပ်ကောင်များ၊ ပင်လယ်ခူ၊ အင်းဆက်များ နှင့် လူသားများအထိ လွှမ်းခြုံထားသော တိရစ္ဆာန် လောကအတွင်းရှိ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို ဆိုလိုသည်ဟု ဖွင့်ဆို၏။ (The biological definition of the word refers to all members of the kingdom Animalia, encompassing creatures as diverse as sponges, jellyfish, insects, and humans.) 
သတ္တဝါအုပ်စုအလိုက် ရှင်သန်နေထိုင်ဆဲ မျိုးစိတ် အရေအတွက် စာရင်းဇယား
၁၇,၀၀၀ ရှိ (မြေဆီလွှာ)  ရှိ  ၁,၇၅၀ ရှိ ၄၀၀
၉၄,၀၀၀ ရှိ  ၄၅,၀၀၀ အထက်[မှတ်စု ၁]
၆,၀၀၀  ရှိ  ၆၀ ~ ၈၀  ရှိ
၇၀,၀၀၀ အထက် ၂၃,၀၀၀  ၁၃,၀၀၀  ၁၈,၀၀၀၉,၀၀၀ ရှိ ၄၀
၁၆,၀၀၀  ရှိ ရှိ(အနည်းငယ်) ရှိ ၁,၃၅၀ အထက်
၇,၅၀၀  ၇,၅၀၀  ရှိ
၈၅,၀၀၀ ၁၀၇,၀၀၀  ၃၅,၀၀၀  ၆၀,၀၀၀  ၅,၀၀၀ ၁၂,၀၀၀  ရှိ ၅,၆၀၀ အထက် 
၂၅,၀၀၀ ရှိ (မြေဆီလွှာ) ၄,၀၀၀  ၂,၀၀၀ ၁၁,၀၀၀  ၁၄,၀၀၀ 
၂၉,၅၀၀  ရှိ ရှိ ၁,၃၀၀ ရှိ၃,၀၀၀~၆,၅၀၀ ၄၀,၀၀၀ အထက်၄,၀၀၀–၂၅,၀၀၀ 
၂,၀၀၀  ၄၀၀ အထက်  ၂,၀၀၀  ရှိ
၁၀,၈၀၀  ရှိ ၂၀၀ ~ ၃၀၀ ရှိ ရှိ
ဖော်ပြထားပြီး မျိုးစိတ် အရေအတွက် စုစုပေါင်းမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စာရင်းအရ[update]။ ၁, ၅၂၅, ၇၂၈  ရှိသည်။
Deuterostomes ဒုတိယအပေါက် ပါရှိသော တိရစ္ဆာန်များတွင် အဓိကအားဖြင့် ပါဝင်လျက် ရှိသော Phylum များမှာ Echinoderm (ပင်လယ်မျှော့နှင့် ကြယ်ငါး) နှင့် ကျောရိုးရှိ တိရစ္ဆာန်များ (Chordata) ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲထားသည်။ ကျောရိုးရှိ တိရစ္ဆာန်များတွင် ငါး၊ ကုန်းနေရေနေ သတ္တဝါ၊ တွားသွားသတ္တဝါ၊ ငှက်နှင့် နို့တိုက်သတ္တဝါများပါသည်။
↑ Not including parasitoids.
↑ ၃.၀၀ ၃.၀၁ ၃.၀၂ ၃.၀၃ ၃.၀၄ ၃.၀၅ ၃.၀၆ ၃.၀၇ ၃.၀၈ ၃.၀၉ ၃.၁၀ ၃.၁၁ ၃.၁၂ Zhang, Zhi-Qiang (2013-08-30). "Animal biodiversity: An update of classification and diversity in 2013. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013)". Zootaxa 3703 (1). doi:10.11646/zootaxa.3703.1.3. Archived 24 April 2019 at the Wayback Machine.
↑ ၄.၀၀ ၄.၀၁ ၄.၀၂ ၄.၀၃ ၄.၀၄ ၄.၀၅ ၄.၀၆ ၄.၀၇ ၄.၀၈ ၄.၀၉ ၄.၁၀ ၄.၁၁ ၄.၁၂ There are only 35 kinds of animal and most are really weird။ BBC Earth။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ ၅.၄ ၅.၅ ၅.၆ ၅.၇ ၅.၈ Balian၊ E. V.; Lévêque၊ C.; Segers၊ H.; Martens၊ K. (2008)။ Freshwater Animal Diversity Assessment။ Springer။ p. 628။ ISBN 978-1-4020-8259-7။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ ၆.၄ ၆.၅ ၆.၆ Poulin၊ Robert (2007)။ Evolutionary Ecology of Parasites။ Princeton University Press။ p. 6။ ISBN 978-0-691-12085-0။
↑ Poore၊ Hugh F. (2002)။ "Introduction"။ Crustacea: Malacostraca။ Zoological catalogue of Australia။ 19.2A။ CSIRO Publishing။ pp. 1–7။ ISBN 978-0-643-06901-5။
↑ Uetz, P.. "A Quarter Century of Reptile and Amphibian Databases". Herpetological Review 52: 246-255.
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ Reaka-Kudla၊ Marjorie L.; Wilson၊ Don E.; Wilson၊ Edward O. (1996)။ Biodiversity II: Understanding and Protecting Our Biological Resources။ Joseph Henry Press။ p. 90။ ISBN 978-0-309-52075-1။
↑ Burton၊ Derek; Burton၊ Margaret (2017)။ Essential Fish Biology: Diversity, Structure and Function။ Oxford University Press။ pp. 281–282။ ISBN 978-0-19-878555-2။ Trichomycteridae ... includes obligate parasitic fish. Thus 17 genera from2subfamilies, Vandelliinae;4genera, 9spp. and Stegophilinae; 13 genera, 31 spp. are parasites on gills (Vandelliinae) or skin (stegophilines) of fish.
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ ၁၂.၂ ၁၂.၃ Nicol, David (June 1969). "The Number of Living Species of Molluscs". Systematic Zoology 18 (2): 251–254. doi:10.2307/2412618.
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ ၁၃.၂ Felder၊ Darryl L.; Camp၊ David K. (2009)။ Gulf of Mexico Origin, Waters, and Biota: Biodiversity။ Texas A&M University Press။ p. 1111။ ISBN 978-1-60344-269-5။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ Pandian၊ T. J. (2020)။ Reproduction and Development in Platyhelminthes။ CRC Press။ pp. 13–14။ ISBN 978-1-000-05490-3။
↑ Fontaneto၊ Diego။ Marine Rotifers | An Unexplored World of Richness 4–5။ JMBA Global Marine Environment။2March 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Morand၊ Serge; Krasnov၊ Boris R.; Littlewood၊ D. Timothy J. (2015)။ Parasite Diversity and Diversification။ Cambridge University Press။ p. 44။ ISBN 978-1-107-03765-6။ 12 December 2018 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။2March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တိရစ္ဆာန်&oldid=727882" မှ ရယူရန်
၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။